Ciidanka Heeganka Bariga Afrika oo diyaar u ah howlgal. – STAR FM SOMALIA
5,200 Askari oo ka mid ah Waddamada Bariga Afrika ayaa lagu diyaariyay dalka Uganda waxaana loo diyaariyay waxka qabashada Waddamada Bariga Afrika gaar ahaan amniga.
Ciidankan oo ka kooban 3 guuto ayaa waxaa ay isugu jiraan Ciidamada Lugta,kuwa gaarka ah,Booliska oo loo qeybiyay 5 qeyb,qeybtiina ka kooban tahay 140 Askari,Shaqaale rayid ah iyo noocyo kale oo ka mid ah Ciidamada.
Madaxda Ciidamada Waddamada Bariga Afrika oo ka kooban 10 dal ayaa ku shiray Hoteel ku yaalla Magaalada Kampala ee dalka Uganda,waxaana ay ku dhawaaqeen in ciidankaas ay diyaar u yihiin in ay howlgalaan.
“waxaan heysannaa Ciidan la taaban karo,waxaan heysannaa ciidan la arki karo,waxaan heysannaa ciidan aan annaga tababarannay ,kuwaas oo u diyaar ah in howlgal,haddii berri ay na soo wajahdo codsi ciidan daadgureyn ah waxaan nahay diyaar shuruud la’aan”ayuu yiri James Mutabazi, oo ka mid ah madaxda Ciidamada Bariga Afrika ee Heeganka ah.
Waxaa uu intaas ku daray in Ciidanka Heeganka Bariga Afrika ay la mid yihiin kuwa 4ta Gobo lee kale ee Qaaradda Afrika,waxaana uu intaas raaciyay in howshooda ay tahay in ay faragelin Waddamada Bariga Afrika ee ay qatarta ka soo wajahdo.
Ciidanka ayuu sheegay in ay u shaqeyn doonaan qaab wareegto ah oo lixdii biloodba ay koox shaqeyn doonto waxaana uu ku daray in lixda bil ee ugu horreyso ay ka billaabaneyso Janaury ilaa juun 2017ka.
Xoghayaha Maamulka Maaliyadda ee Wasaaradda difaaca Uganda ayaa sheegay in ciidankan loo abuuray kaliya in ay xalliyaan dhibaatooyinka Afrika.
“waxaa na daashaday khilaaf dhexdeenna ah tusaale Soomaaliya,waxaana xalkeeda u yimid Mareykanka,weyna ku fashilmeen,waxaana kaddib galay Ciidankeenna Afrika,waxaana hadda ka sameyneynaa horumar iyo xasillooni sidaas darteed xalka ugu muhiimsan ee Afrika waa in iyada is xalliso”.
Ciidamadan ayaa ka socda Waddamada Bariga Afrika oo kala ah; Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Somalia, Seychelles, Djibouti, Comoros, Ethiopia iyo Sudan.
Uganda waxaa kaga jira 800 oo Askari,30 Gaadiidka dagaalka ah,Diyaarado dagaal,Hubka waa weyn ee Ciidanka sida lidka diyaaradaha ,hal Isbitaal,10 Taangi oo gaadiidka dagaalka ah iyo qalabka kale ee farsamada Ciidamada.
Ciidamo katirsan Booliska Soomaaliya oo Tababar Ku soo Qaatay dalka Jabuuti ayaa soo gaaray magaalada muqdisho